कस्तो अचम्म, १६ वर्षको केटीको पेटमा १२ वर्षे केटाको गर्भ ! | News Dabali
कस्तो अचम्म, १६ वर्षको केटीको पेटमा १२ वर्षे केटाको गर्भ !
January 30, 2017 | 11:25 pm
दिल्ली । पत्याउन गारो तर सत्य घटना घटेको छ । भारतकोे मध्य प्रदेशको सोनवर्षा गाउँमा एक जना १६ वर्षको केटीको पेटमा १२ वर्षे बच्चको रहेको छ । यही विषयलाई लिएर उक्त केटीले सोहागी प्रहरी थाना उजुरी दिएकी छिन् । उनका अनुसार आफू एक जना गाउँलेको घरमा खाना खान गएको थिए । तर राती परपछि उतै सुतेको बताएकी छिन् । आफू विहान उठ्दा मसँग त्यही १२ वर्षे केटा सुतीरहेको थियो । उनले आफूलाई त्यो १२ वर्षे केटाले वलत्कार गरेको दाबी गरेकी छन् ।
तर उनले राती आफरुहरुबीच यौन सम्बन्ध भएको भन्ने कुरा भने गोप्य राखेकी छिन् । उनले प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले १२ वर्षे केटाको मेडिकल रिपोर्ट चेक गरेको छ । रिपोर्टमा उक्त १२ वर्षे केटाको नभएको जनाइएको छ ।
ती गर्भवति महिलाले भने त्यही १२ वर्षे केटा गर्भ रहेको दाबी गरिहेकी छिन् । उनको दाबीपछि गाउमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । प्रहरी पनि अलमलमा परेको छ । अब कसरी यो मुद्दालाइ जाँच गर्ने भनेर विज्ञहरुसँग सल्लाह लिइरहेको बताइएको छ ।